भोट हाल्ने दिन कहिले आउला भन्दाभन्दै आइसक्यो । स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको दुई दशकपछिको अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै छन् । अब गाउँमा सिंहदरबार भन्ने मिठो वाक्य सुनाउँदै दलका नेता नागरिकको घरघरमा पुगीरहेका छन् । कोहीले सिंहदबारको काम गाउँमा उपहार ल्याउछौं भन्दै हिडेका छन्, कोही अब मुलुकमा समृद्घि चाहने हो भने हामीमात्रै असल पार्टी हौं भन्दै आफूले आफैंलाई स्वघोषणा गरिरहेका छन् । जनतालाई यो खालको सपना देखाउनु ठिकै हो, किनभने नेपालीहरु अर्काको आशमै अहिलेसम्म बसेका छन् । मेरो काम फलानोले गर्दिहाल्छ, मैले किन काम गर्नु, म त अब सुतिसुति खान पाउने भए भनेर मख्ख पर्नेहरु छन् केही केही । आशैआशमा दिन बिताउनेलाई कुनै दिन कसैको आश्वासन सुन्न पाइएन भने दिक्क लाग्दो हो । आफू केही नगर्नेका लागि त राम्रै अवसर हो, सित्तैमा पाएपछि दुःख किन गर्नुपर्यो र ? सोचेको खोजेको फ्याट्ट दिई हाल्ने दाता सधैं पाइन्छ त ? यस्ता बसीबसी खानेलाई कहाँबाट आउँछन् त्यस्ता दाता ? समयक्रमले दातालाई ल्याउदो रहेछ । नेपाल देशै यस्तो भइदियो कि आफैंले केही नगर्ने अरुले दिएमा सकेसम्म लिने । अझ यो चुनावको बेलामा त बसीबसी खानेलाई झन् अवसर जुटेको छ । केही केही शिक्षक, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी पार्टीको झण्ठा बोकेर चुनावी कार्यक्रममा दौडिएको देख्न पाइन्छ । यो अवसरकै लागि हो भन्छन् जानेबुझेका र स्वाद लिएकाहरु । हिजोका दिनमा जागीर खाँदा सोही पार्टीले सहयोग गरेकाले अहिले परेको बेला पार्टीलाई सहयोग नगरेर कसलाई गर्ने त भन्ने पनि छन् । चुनावको आचारसंहिता यीनलाई लाग्नु नपर्ने हो ?
मकवानपुरका केही केही नेताले सार्वजनिक कार्यक्रममा यो विकासका लागि हाम्रो पार्टीका तर्फबाट यति र उति भन्दै धमाधम घोषणा गर्दै हिडीरहेका छन् । चुनावको मुखमा रकम दिने घोषणा आचारसंहिता विपरित होइन र ? तर के भन्नु देशका लागि मूल कानून बनाउन जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधीलाई यस्ता भइदिएपछि । यो खोलाको बाँध बाँध्नका लागि मेरो तर्फबाट यति करोड, यो चउरका लागि यति, यो ठाउँमा मेरो तर्फबाट यति भन्दै मनलाग्दी घोषणाहरु केहीकेही माननीय मरिमेटेर लागेका छन् । अनि धेरैलाई उधारो जागीर पनि बाँड्दै हिडेको देख्न पाइन्छ । चुनावी आचारसंहिता मिचेको भन्दै एउटा दलले अर्को माननीयलाई निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी दिएको अवस्था पनि मकवानपुरमा छ । जनतालाई मख्ख पार्नका लागि जे पनि गर्ने, जे पनि बोल्नेहरुलाई तह लगाउनसक्ने अधिकार वास्तवमा यतिबेला कोहीसंग नभएरै हो त ? आचारसंहिता एकातिर, कामकुरो अर्कोतिर भइरहेको हामी पाउँछौं । आचारसंहिताले विभिन्न उम्मेदवारका लागि यो भन्दा बढी खर्च गर्न नपाउँने, प्रचारप्रसारको दायरा यो, विकास निर्माणका काम अहिलेको समयमा गर्न नपाइने भनेर बाँधेको छ । तर यहाँ त्यसको कुनै मतलव छैन, मलाई किन चाहियो आचारसंहिता ? म त सबैभन्दा ठूलो पो हुँ त, मैले जेजे गरेपनि हुन्छ भन्ने लाग्दो हो उम्मेदवार अनि पार्टी नेताहरुलाई । चुनाव भड्किलो र खर्चिलो नबनाउन बनाइएको नियम तोड्नमा जो अग्रसर भयो उही ठूलो हुने समाजको सोचाईको कारण पनि यी सब नाजायाज गतिविधी हाम्रा आँखाले हेर्न विवश बनिरहेका छन् । अघिपछि मोटरसाइकलको ताँती, भोजभतेर खुवाउनेको लस्कर, भोजभतेर खान इच्छुकको समूह ओहो ओहो चुनाव हुन लाग्दा त हुलका हुल मान्छेहरु कति निस्किएका गाउँगाउँको भट्टि, शहरको रेष्टुरेन्ट जताततै भरिभराउ । जो सबैभन्दा बढी आचारसंहिता मिचेर हिड्नसक्यो उसैले चुनाव जित्छ भन्ने खालका केहीकेही टाउके, पार्टीबाट मौका यही हो भन्दै सकेजति कुम्ल्याउने केहीकेही कार्यकर्ता सबैका लागि कति राम्रो कमाउने मौसम यो चुनाव । जो अगुवा, उही कुन्नी के जाती भनेझैं चुनावलाई सभ्य रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्छ, धेरै तडकभडक गर्नुहुन्न भनेर जसले नागरिकलाई बुझाउनुपर्ने नियम पालक बनेर देखाउँनुपर्ने उसकै अग्रसरतामा यी सब काम भइरहेको टुलुटुलु हेरेर बस्ने बाहेक हाम्रो पनि के नै काम छ र ?
समाज पनि यसरी बिग्रदै छ की अरुको देखासिकी नगरी स्वविवेकमा बाँच्नेहरु कम हुन थाले । आफ्ना लागि दुःख आफैं गरौं, सधैं परनिर्भर बन्नु हुन्न भन्ने सोच पलाउँदै पलाएन । समाजलाई बाटो देखाउने, न्याय दिने भनेकाहरुको मति बिग्रीएपछि एक दुई जना सज्जनको के भाउ ? त्यस्ता सज्जनलाई सकेसम्म समाजबाट धपाउने नभए अनेक उपाय लगायर लज्जित बनाउने कामहरु गर्नमा मान्छे आजकल बढी सक्रिय छ । आफ्नो श्रममा बाँच्न खोज्नेलाई लज्जित बनाउको काम हाम्रा यस्तै नेतागिरी गर्नेबाट भइरहेको छ । उनीहरुका झुटा आश्वासनलाई सहजै इन्कार गर्नसक्ने क्षमता हामी सबैमा भगवानले पहिले दिनुप¥यो । भगवानले भन्दा पनि हामी आफैंले आफ्नो क्षमता त्यसरी बनाउँनुपर्ने हो खासमा तर अहिले यहाँ सबैकुरा परनिर्भरमा बाँचेका हामीलाई एकैपटक आत्मनिर्भर हुन नसकिएला भनेर । नेताहरु पनि चुनावका बेला परजीवीहरु कहाँ कहाँ छन्, आर्थिक रुपमा कमजोर भएकाहरु कहाँकहाँ छन् भन्दै खोज्दै आउँछन् । यस्तै ठाउँका मान्छेलाई त हो गुलिया मिठा कुराहरु सुनाउँन पाइने । अनि सजिलै हस् भइहाल्छ नि यति राम्रो कुरा गर्नेलाई त भोट नदिएर हुन्छ त भनेर रनभुल्ल पर्नेहरु धेरै छन् । यस्ता समुदायमा पुगेर मनमा लागेको जति दिन्छु भन्ने, मत लिएर हिडेपछि टाप कस्ने, घर बनाउँने, व्यापारी र भ्रष्टहरुसंग दोस्तीदोस्ती बढाउने हामीले नदेखेको को र ? गत संविधानसभाको चुनावबाट विजयी भएका केही माननीयले गाउँको सानातिना कामलाई यसो र उसो गर्छु भने बमोजिम नगरेर फोन नै नउठाउने गरेको गुनासो आइरहेको छन् । कोहीकोहीले खुच्चिङ् खुच्चिङ् त्यस्ता फटाहालाई किन भोट दिएको त भनेर भनेको पनि सुनिन्छ । अहिले तिनै व्यक्ति त भोट मलाई भन्दै नआउलान् तर त्यस्तै त्यस्तै रुप भएका हेर्दा भद्र, राम्रा, भिजन–भिजनै सुनाउने, भाषण सुन्दा उ बाहेक अरु कोही नेता नै होइनन् झैं लाग्ने आइरहेका छन् । जथाभावी सपना बाँड्ने, स्वर्गैकै एउटा टुक्रा ल्याइदिन्छु भन्ने लाज पचेका र नैतिकता गुमाएकाबाट टाढै रहनुपर्छ । तर के गर्नु हामी अर्काको भरमा बाँचेकाहरुले स्वविवेकले निर्णय गर्ने बानी छैन, समय लाग्ला ।